Aya ndiwo marekodhi aunogona kutenga muna Chivabvu | Bezzia
Maria vazquez | 06/05/2021 12:00 | Nhau
Kune zvakawanda mimhanzi inoburitswa iyo yatinogona kunakidzwa mwedzi wega wega. Nekudaro, muBezzia, isu tinomanikidzwa kuita zvishoma kuongorora kuti tikupe iwe diki sarudzo yematanhatu kana manomwe maalbum. Uye zvemwedzi waMay, izvi ndizvo zvaburitswa zvatakasarudza, uzviwane!
1 Zvese zvandinoziva kusvika zvino - Pink
2 Be back back - Jorja Smith
3 Synapse - Anotya Musikana
4 Delta kream - Iyo Nhema Keys
5 Chiedza Makore - Iyo Tsvuku Kamuri
Zvese zvandinoziva kusvika zvino - Pink
Pink yakazivisa muna Kubvumbi apfuura kuvhurwa kweiyo nyowani rarama albha yakanzi All Ndinoziva kusvika zvino. Ndiwo zvakare musoro wenziyo chete isina kuburitswa inosanganisirwa mune yegumi neshanu pakati payo, kuwedzera kune kumwe kubudirira kwayo kwakanyanya kunorarama (Musikana chete, Saka chii, Ko isu ...) vhezheni ye "Ndivhare Muzuva" nemwanasikana wake Willow Sage Hart.
Iyo albham inokwenenzvera kune iyo zvinyorwa zvezita rimwe chete iro richava yakaburitswa paAmazon Prime Chivabvu 21. Runyorwa rwakatungamirwa naMichael Gracey weThe Greatest Showman uyo anogovera mavhidhiyo asina kuburitswa kubva kune 'Akanaka Trauma' akazoguma muna 2019 paWembley Stadium.
Be back back - Jorja Smith
Jorja Smith akaburitsa kanopfuura mwedzi wapfuura Akapindwa muropa, rwiyo rwakagadzirwa naCompass ruchazarura dambarefu rake idzva "Be righ back". Iyo albhamu ichauya muna Chivabvu 14, makore matatu mushure mekutanga kwayo Yakarasika & Kuwanikwa uye iyo ichave iine matreki masere pakati payo iri Vakaenda, yavo yazvino vasina kuroora.
Synapse - Anotya Musikana
«Rwendo kuburikidza nehurongwa hwenyanzvi hweartist iyo, kuburikidza nemaurotransmitter akasiyana, ichatitaurira isu nyaya dzakasiyana dzaakasangana nadzo muhupenyu hwake. Sayenzi nemweya zvakasanganiswa mune rimwe dambarefu. Aya ndiwo maratidziro anoitwa naSobresalto Musikana dambarefu rake rekutanga, Synapsis.
Synapse inouya kubva muruoko rweEl Dromedario Records pasi pe Kugadzirwa kweSantos & Fluren (Sidonie, Rudo rweVanhukadzi). Fusion yenukosi, Adrenaline naZahara uye ichangoburwa Natural Selection ndedzimwe nziyo gumi dzinogadzira dambarefu iro rinenge riine chinyorwa chakakosha paCD uye pavinyl nedhiza rakasainwa naMaialen, piki kubva kuna Chica Sobresalto uye a rakakosha bhokisi rine mahwendefa gumi ane mabutiro enziyo yega yega, mufananidzo wakasainwa webhandi nekuzvipira uye "basa", chinyorwa apo Maialen nevanhu vakamukomberedza vanotaura nezvenzira yavo yekuumba uye yavo yekugadzira nyika.
Delta kream - Iyo Nhema Keys
Delta kream ndiyo yegumi studio album naBlack Keys. Haisi, zvakadaro, studio studio ine nziyo nyowani, asi chakavhara albha iyo ichapa mutero kumumhanzi wakagadzirwa wakatarisana nenzvimbo ye Mississippi Chikomo Nyika Blues.
Pane iri disc rakanyorwa muEasy Eye Inzwi uye rakaburitswa neNonesuch Records tinogona kuteerera kushanduro kubva kuvaimbi vakaita saJohn Lee Hooker, RL Burnside, Junior Kimbrough, Ranie Burnette naBig Joe Williams. Kukweva kudzoreredza kwaKingsnake ndiko kwekutanga teaser.
Chiedza Makore - Iyo Tsvuku Kamuri
Iyo Red Room yazivisa kuvhurwa kwenyaya yayo nyowani, "Makore Chiedza", iyo ichaburitswa muna Chivabvu 28 mune yedhijitari fomati. CD, vinyl uye kwenguva yekutanga pane kaseti. Makwara gumi anoumba dambarefu ratakatokwanisa kuteerera: "El Miedo Abierto", "Yo me Wonder", "Patria", "Taquicardia" kana "1986".
«Gore rakareruka rakanyatsoita 9 km. Makatibvunza pamusoro pegore rapfuura kana tichizosunungura izvi nziyo dzatakavaka semabhiriji kuitira kuti iwe utinzwe isu padyo mune rimwe risinganzwisisike makore ehupenyu hwedu. Tave kure, kure, asi nekuda kwemumhanzi watinogovana isu takakwanisa kupfupisa madaro ».
Zenet yakatanga kuratidzwa svondo rapfuura vhidhiyo ra "Me gustas", rwiyo kubva kuAlbum yake "La menor explicación" yaakanyora zvakare naEl Kanka uye inoshanda seyakatarisisa dambarefu rake reZenetianos. Iyo albha yemaviri maanobatana nevanyori vaanoyemura uye maanotarisa dzimwe nziyo dzechiratidzo dzebasa rake «achivafukura nekuadudzira pamwe chete nemuenzi achiperekedzwa chete negitare raJosé Taboada uye nechimwe chiridzwa chega senge violin naRaúl Márquez kana hwamanda naMachado. »
DePedro, Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Javier Ruibal, Vanesa Martín, Coque Malla, Miguel Poveda, Xoel López, Julia de Castro naVíctor Herrero, Virginia Maestro, Pasión Vega, Marilia Monzón naMarwán, vachange vari vamwe vevashanyi vake pane ino albamo. .
Ndeapi emaarubhamu aunoda kuva nawo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Aya ndiwo marekodhi aunogona kutenga muna Chivabvu
Zvikanganiso zvaunoita kana uchichenesa imba yako ne bleach